ABSDF Mass murderer Ronald @ Aung Naing | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ABSDF Former Secretary and Chairman’s opinion on the ABSDF Northern Killing Field (in Burmese)
ABSDF (NB) Killing Field : ကျနော် လူကက်ဆက် ပန်းချီ ထိန်လင်း »
This entry was posted on December 25, 2011 at 6:44 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
13 Responses to “ABSDF Mass murderer Ronald @ Aung Naing”
December 25, 2011 at 8:23 am | Reply
COMMENTS in FB.
Moe Zaw Aung Spinning the story! Main theme is,” extrajudicial killings” I feel pretty good for unloadingalittle bit.
သံလွင် ရရစ် …အကိုတို့ ကွန်မန့်တွေကဗဟုသုတအများကြီးရလိုက်ပါတယ် အဲဒီသမိုင်းကိုပြန်ရေးရင် ကောင်းတာရော ဆိုးတာပါ အတည့်အလင်းရေးသင့်ပါတယ်
ကို Hlaing Bwa နဲ့ တကွ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ အခု ဗမာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသားတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိစ္စ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တကွ ဘယ်သူတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူတွေ မတရားစွပ်…စွဲခံခဲ့ရတယ် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ပေါ်လာပါပြီ။ အလားတူပဲ ဗမာပြည် တောင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ဖော်ထုတ်ဖွင့်ချရေးသားကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
Mg Tharmyar ရုပ်ကိုက မုဒိမ်းကောင်ရုပ်၊လောက်ကောင်ရုပ်၊ပြည်တွင်းရောက်ရင်တော့ကွာ……
Zay Yar ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ သမိုင်းမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို လာမည့် အနာဂတ်လူငယ်တွေသိအောင်လို သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ဖို.လို. သမိုင်းအကြောင်းရေဖို.လို လိုနေပြီ… ဒီအချိန်မှာ အမှန်တရားကို သိခဲ့တဲ့သူတွေက ဖော်ထုပ်ရမည့်အချိန်ရောက်နေပြီ…
Zaw Zaw Hlaing
ဒီကိစ္စက ဒီမှာ ရေးရုံပြောရုံနဲ့ပြီးသွားမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဖူးလို့ထင်ပါတယ်… အချက်အလက်တင်ပြတာလောက်ဘဲဖြစ်မှာပါ… အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖေါ်ထုတ်ရမဲ့ အချိန်တခုကို မကြာခင်တော့ ရောက်လာမှာပါ.. အဲ့ဒီအချိန်မှာ တကယ်တန်းအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာပါဝင်တဲ့ ရဲဘော်တွေလဲ သက်ရှိထင်…ရှား ရှိနေအုံးမှာပါ.. ကျနော်တို့ကတော့ အဲ့ဒီကိစ္စမှာ လုပ်ကြံခံလိုက်ရတဲ့ ရဲဘော်တွေဘက်က ရပ်တည်မှာပါ… လုပ်ကြံလိုက်တဲ့ လူတွေကလဲ သူတို့အခွင့်အရေးအရ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်.. တကယ်အဖြစ်အပျက်တွေက အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာပါ..ဒါဟာ တော်လှန်ရေးနယ်မြေက အထင်ကရ သမိုင်းဝင် အဖြစ်အပျက်တခုပါ..ဘယ်တော့မှ မေ့လိုရမဲ့ ကိစ္စတခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး…
အဲဒီထဲက တင်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေအတော်များများဟာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် မေးမြန်း လေ့လာမှုများအရ အမှန်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်.။ ဘယ်သူတွေက အမိန့်ပေးခဲ့သလည်းဆိုတာကတော့ ခုထိမရှင်းလင်းသေးပါဘူး.။ တနေ့တော့ စာရင်းရှင်းရဦးမှာပါ.။ လူသတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နေ…ရမှာပဲသတ်သတ် လူသတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီအတွက် စာရင်းမရှင်းမကြေအေးနိုင်သေးသရွေ့ သတ်တဲ့သူတွေမှာ တာဝန်ယူရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်။ စစ်မြေပြင်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသေသတ်ကြတာ တရားပေမယ့် သုံ့ပန်းအဖြစ်မိထားခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ရက်စက်တဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ် (ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတောင်) သုံ့ပန်းပေါ်လစီကိုလေးလေးစားစားလိုက်နာရပါတယ်. နောက်မှ တရားစီရင်ပြီး ပြစ်ဒါဏ်ချတာကတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်.။ ရန်သူတွေပဲသေအောင်ချပစ်လို့ ခံယူလုပ်ဆောင်ရင်တော့ ယခုလို အမှားကြီးမှားသွားခဲ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်. ယခုလိုတင်ပြပေးတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းစရာတွေနဲ့အတူ သံဝေဂရစရာ ဗဟုတုသရစရာ တွေ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်.။ စာရေးသူနဲ့ ဖြန့်ဝေပေးသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။ တခုပြောချင်တာက ယခုလိုမဖြစ်သင့်တဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာ တိုင်းပြည်မှာယခင်ကရှိခဲ့တဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် တိုင်းပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရေးမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့် လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်.။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလက်ရှိခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ တရားသံဝေဂတွေရပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမြန်တည်ဆောက်ကြရန် တကယ့်ဂတိအစစ်အမှန်ကိုပြုပြီး တိုင်းပြည်အကျိုး ပြည်သူအကျိုးအတွက် အားလုံး လက်တွဲပြီးအတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြရန် တိုက်တွန်း/ ဆန်ဒပြုပါတယ်.။See More
Ko Ko Htay SHARED From the Killing Field of ABSDF by SAMAR Nyi Nyi
You mother f***ers; you all know that all of us are not spies.
Kyaw Wai cannot continue anymore. Myo Win advancesastep and chops down the head of Kyaw Wai from the neck. Head drops and ro…les affront and rest on the ear. It is like butcheringacow.
As Cho Gyi stretches out his left hand, Myo Win chops the wrist with his sword….
That is, the so called democracy loving students are torturing fellow democracy loving students and elder democracy loving politicians and spectators are keeping blind eyes on the matter. Everybody in this game is the democracy loving revolutionists.
At that time he had to commit more crime in order to challenge the opposition to shut the mouths. I am giving you the detail mental progression of ABSDF (NB)See More
Ko Ko Htay These guys are very bad; Yan Shin was also killed cold bloodedly. Yan Shin went to ABGF India camp and brought Than Chae from there to work in ABSDF. When they reached Phar Khant area back from India, Yan Shin and another guy from Mandalay were beheaded.
Khin Nyein Thit ကိုသားဆွေရေ……inter news ကိုစာရေးပြီး ကန့်ကွက်ရအောင် စာကြမ်းလေးလုပ်ပေးပါလား။ ကျမတို့အားလုံးလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်လေ။ ဒီလိုလူတွေကို တိုက်ထုတ်သင့်တယ်။ရောနယ်အောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်တောင် အစိုးရကလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်နိုင်တယ်။ သေသွားတဲ့လူတွေထဲမှာ ကျမသိတဲ့လူတွေပါတယ်။ သူတို့က တော်လှန်ရေးမှာ တကယ်ကို ရိုးရိုးသားသားပါခဲ့သူတွေလေ။
Lily Htut so sorry to read n get shock. Ko Cho Gyi is my friend’s big bro. If she know about how her brother die, I cannot say what will happen her mind again. yin nar lite ter 😦
Ko Ko Htay Above paragraphs which I post were written by my own younger brother who involve in this incident.
Ko Ko Htay http://www.facebook.com/groups/rozonerking2/doc/309496765750906/
▛▝▝ ▝▝▝▝▝▝▝▝▝▜ ▙ ဒါလေးကို နှိပ်ပါ ခင်ဗျာ. ▟ …▼▼.. ● About Big Brothe…rs & Sisters Group ➨http://www.facebook.com/groups/rozonerking2/doc/276670465700203/ [- The River Club-] …See More
Ko Ko Gyi They should be arrested by ICC. Even Mr. Bertil Lintner told me that he had reminded them that those atrocities were/are wrong even if done by any side.
My brother, SMAR Nyi Nyi Wrote in Irrawaddy:
You and Aung Naing Oo were at the ABSDF(NB) camp, while we were tortured.
There, we Muslims received bad treatment and one of our Muslim brothers, Zaw Win Chit of Bamow, was beaten to death.
When they tortured me, they called me KALA and other derogatory words about Islam and Muslims. ABSDF guys are history. If they become leaders we will send them to the ICC for crimes against humanity.
Aung Zin Myint သူလဲတစ်နေ့ဝဋ်လည်မှာပါ
Tom Soe အဲဒိအချိန်က ကချင်ကဒီအတွက် ABSDF သတ်ဘို့ ခွင့်တောင်းတာကိုသိတဲ့အတွက် လက်မှတ်မထိုးဘို့ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ် သေခြာမစုံစမ်းဘဲ ဘာအပေးအယူနဲ့ လက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတာ အတိအကျမသိရပါ ဒေါင်းဂွင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအများဆုံးသိနိုင်ပါတယ် အမှန်တရားကိုသိရင်ဖေါ်ထုတ်ကြပါ အမှန်တရားအတွက်ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေစောင့်နေကြမှာပါ
ဗမာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအ၀င် တောခိုလာတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ရက်ရက် စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ….. အောင်နိုင်ခေါ် ရော်နယ်အောင်နိုင်…. ယခု – ထိုင်းနိုင်ငံ internews သတင်းဌာနတွင် အလုပ်လုပ်နေ။ ဒီသတင်းကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အားလုံးသိ…အောင် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးလိုက်ကြပါ။
ရော်နယ်အောင်နိုင်ရဲ့ ဖုံးနံပတ် +66 815302837
အသောက အသောက အသောက http://guidingstarsofburma.blogspot.com/2011/12/blog-post_9684.html
December 25, 2011 at 8:25 am | Reply
Ko Ko Gyi ‎@ Moe Zaw Aung, KKH just quote (but failed to write/indicate properly that the F four letter words were the words of Kyaw Wai before he died after torture. This was recorded by SMAR Nyi Nyi who also suffered the detention and torture by these criminal ABSDF splinter headed by Aung Naing. Naing Aung also knew but done nothing.
ABSDF ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတာလဲ? ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲမေးရင်တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ် တဲ့ထိုစဉ်ကဥက္ကဌတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကရှင်းပြနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်။ အဲဒီတုံးကဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဘာကြောင့်ဒီလိုအရုပ်ဆိုး အကျဉ်းတန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ ဘယ်သူကဒီလုပ်ရပ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့သလဲ?၊ အေဘီဗဟိုကဒီလုပ်ရပ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့တာလား? အေဘီကချင်ကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ခဲ့တာလား?။ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်မှန်များကိုသတ္တိရှိရှိတင်ပြပြီးအများကစဉ်းစားကြဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
I think (actually deducted toaconclusion) that as there wasapower struggle in ABSDF (central or lower Burma) between Ko MTZ and Naing Aung, Naing Aung came to upper Burma ABSDF to just get the support. So he may have know the truth but …may have keep quiet about the atrocities. So he is also responsible with the Command responsibility, sometimes referred to as the Yamashita standard or the Medina standard, and also known as superior responsibility, is the doctrine of hierarchical accountability in cases of war crimes. Ref @ http://en.wikipedia.org/wiki/Command_responsibilitySee More
Command responsibility – Wikipedia, the free encyclopedia
Command responsibility, sometimes referred to as the Yamashita standard or the M…edina standard, and also known as superior responsibility, is the doctrine of hierarchical accountability in cases of war crimes.
Ko Ko Gyi For အောင်နိုင်ခေါ် ရော်နယ်အောင်နိုင် …he is responsible for that atrocities, crime against humanity and war crimes. Both Aung Naing and Naing Aung were my old students. (Their parents were my lecturers) And SMAR Nyi Nyi is my brother. So I havearight to know the truth and wish to see them punished if they are really guilty at ICC.
The following fact is not proven but my suspect only or opinion I got after listening to the true stories of my two brothers involved in this case.
I strongly SUSPECTED that this started from the young innocent (or politically and socially… not matured) university students’ campaign of Eradication of Opium drugs production. As we know thatasmall part of the Kachin leaders are involved in this opium production and trade, they may had asked the Moe Nhyin Kachin ABSDF youths to topple the Mdy ABSDF educated youths. They knowingly used the Military Intelligent, MI’s Myet Khin Thit magazine’s propaganda article of boasting that their spies were in the ABSDF. MI article just tried to putawedge in the ABSDF to start cracking. Even if they really have spies, why need to inform the enemy about your spies amongst them?
That story was used by the Aung Naing’s group to start the coup and it degenerated intoamassacre.
Thai female journalist Yindee was there, my brother SMAR NN translated for her. SMAR NN’s and other detainees’ photo was published in FEER (Far Eastern Economic Review) by Bertil Litner. Although many people including me published about this, there is no response from NLD and International authorities including USA, UK and UN.
My another brother went to rescue/negotiate there, of course after informing MI and US/UK Embassies….he is going to publishabook, in Burmese. SMAR Nyi Nyi had also written his experience in English, wish to publish later.
Htay Aung said these words on his FB page:
[ကျွန်နော်လဲ အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဖေါ်ကောင် ဘညွန့် လုပ်နေတဲ့သူတွေက ပညာတတ်တွေပါပဲ။ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကို ဘယ်အချိန်ကာလမှာ ဘယ်လို အ…ပြစ်ဒဏ် စီရင်သလဲဆိုတာကိုလဲ သူတို့ ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးမှာပါ။ မသိဘူးဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ သိတယ်ဆိုရင်တော့ ဖြေရှင်းခြင်း နောက်ကွယ်မှာ မရိုးသားမှုတခုခု ရှိတယ်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲရမှာပဲ။ ယောင်ဝါးတွေပါ လုပ်ချင်တာ တခုပဲ သိတယ်။ သေနတ်ကိုင်တယ်ဆိုတာ ဥပုတ်စောင့်ပြီး လူသတ်နေတာမှ မဟုတ်တာ၊ ဒီဇာတ်လမ်းက နိုင်ငံပြု ၀စ်ဆိုက်မှာ ကိုထိန်လင်း ( ပန်းချီ ) မှ သူခံစားခဲ့ရတာကို ဆောင်းပါးလုပ်ပြီးရေးတယ်။ ဒီကနေ ဖေါ်ကောင်တွေက ပွားလိုက်တာပါ။ အခုက ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင်က ငြိမ်နေတယ်။ သိတယ်ဟုတ် ဘီဘီစီ ကိစ္စလို အွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီး အဖွဲ့အစည်းကို ၀ိုင်းနိပ်ကွပ်မဲ့ အနေအထားဗျ။ ဖေါ်ကောင်တွေမှာ လောလောဆယ် သတ်ကွင်းမရှိ ဖြစ်နေတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဒီပြသာနာကို ဆွဲထည့်လာတာ ဒီသတ်ကွင်းကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားကြပါ။ အားလုံး သိအောင် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ပြောပြမယ်။ နိုင်ငံပြု ၀စ်ဆိုက်က တင်ထားတာကို ကိုထိုက်နှင့် ကိုသားဆွေက စဖေါ်တယ်။ ဒါကို ကျွန်နော်က ခင်ခင်မင်မင်ရှိတဲ့ ကိုသားဆွေရဲ့ ဖဘမှာ စောလွန်းတယ်လို့ ပြောမိတယ်။ နောက် ကိုနိုင်အောင်နဲ့ ကိုမောင်မောင်ဝမ်းတို့ စကားတွေ ပြောကြပြီး ဘာတွေ မကြေနပ် မဖြစ်သလဲတော့မသိ၊ မောင်မောင်ဝမ်းက ကိုအောင်မိုးဝင်းရေးထားတဲ့ မြောက်ပိုင်းက အရိုးတွန်သံ ဆောင်းပါးကို လူတကာ လိုက်ပို့တာပဲ…လူကြီးလူကောင်းလဲ ဆန်ချင်သေး .. စိတ်လေတယ်] My question is why is Ko Htay Aung စိတ်လေတယ် ???? Is it against Dr. Naing Aung’s interest? Shame on you Htay Aung..Shame on you…Shame on you..Htay Aung does seem to haveasoul. Quite obvious!See More
December 25, 2011 at 8:26 am | Reply
ABSDF က လူသတ် ခေါင်းဖြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၏ စိတ်ဓာတ်မျိုး အစိုးရအဖွဲ.မှာ ရှိခဲ့ရင် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအတွက် မတွေး ၀ံ့စရာ။ ထောင်ထဲမှာတောင် ကြာကြာ ထားမှာ မဟုတ်ပဲ SPY တွေ အမျိုးသားသစ္စာဖေါက်တွေ နိုင်ငံခြား Agents တွေပြီး စတဲ့ စွပ်စွဲ ချက်တွေနဲ. သတ်ဖြတ်လိုက်မှာ။ အခုလောက်ဆို အရိုးတောင် ရှာရတော့မှာ မဟုတ်ဘူ။ တကယ်တော့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ SPY တွေ သူလျိုတွေ ဖြစ်လို. သတ်တာတဲ့။ အမှန်မှာ စပိုင်တွေ သူလျိုတွေ ဖြစ်ဦး သတ်စရာမလို။ သတ်ပိုင်ခွင့်လဲ မရှိပါ။ အခုတော့ အကျဉ်းချုံးပြီး ကွက်မျက်မှုတွေ ဆိုတာ ဒီလို အချက်တွေကို ပြောတာ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ABSDF ဒုဥက္ကဌ ကိုမျိုးဝင်းဆိုလဲ အဖွဲ.၀င်တဦးကို သတင်းပေါက် ကြားလို. ဆိုပြီး သတ်မိန်.ပေး သတ်လိုက်ဖူးပါသည်။ ဒီကိစ္စကိုတောင် ABSDF ဗဟိုကော်မတီတောင် အကြောင်းကြား အသိမပေးခဲ့ဘူးတဲ့။ လွယ်လိုက်ကျတာ ကိုယ့်အဖွဲ.၀င် အချင်းချင်း သတ်တာများ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ကြက်ကလေး ၀က်ကလေး ဆိတ်လေးတွေကို ထုတ်သတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ အဲဒါ Jungle Justice လို.များ ခေါ်ရမလား။ ဒီကိစ္စမျိုးတွေကျတော့ BLC ခေါ်တဲ့ ဘာလချောင်ကြော် အဖွဲ. ရှေ.နေအဖွဲ.၀င်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ထူးတို.၊ ဒီဗွီဘီက ABSDF ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးခင်မောင်းဝင်းတို. ။ABSDF တရားရေးအဖွဲ.က မြန်မာမူဆလင် ဦးဝင်းမောင်တို.က နိုင်ငံတကာခုံရုံးတို. အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဖို. လုံ.ဆော်တာ မကြားရပါ။ ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရဖူး ဆိုသလိုပဲ အမှန်တရားဆိုတာလဲ ကိုယ်ဖော်ချင်တဲ့ကိစ္စအတွက်သာ အရေးကြီးတယ်ထင်လို. အဲဒီ BLC အဖွဲ.၀င်တွေလဲဖြစ် ABSDF ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေလဲ ဖြစ်ခဲ့သည့် ဦးအောင်ထူးတို.အုပ်စုတွေဟာ နေရာတကာမှာတော့ Rule of Law တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုပြီး ဥပဒေ စာအုပ်ကြီးတွေ တကိုင်ကိုင်နဲ. နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း စံထားတွေ စာချုပ်စာတမ်းတွေ ပိဋ္ဌိဥာဉ်တွေကို စာပိုဒ်တွေ ပုဒ်ထီး ပုဒ်မတွေ အမျိုးမျိုးကို ထောက်ပြပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အာဘော်အာရင်း သန်သန်နဲ. ပြောတတ်ပေမည့် အခု ABSDF က အကျဉ်းချုံး စစ်ဆေးပြီး သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ. ပတ်သက်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကိုတော့ လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုတာ ထောက်ပြတာ မကြားရသလောက်ပါ။ Rule of Law တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုတာ ဒီလို မြင့်တင်ရမှန်း အခုမှပဲ နားလည်ရမလိုပါ။ ကျဆုံးသွားသည့်ရဲဘော်များ ကောင်းရာ သုဂတိလာပါစေ။ မကြာခင်မှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ. ပြည်သူတွေက သင်တို.အတွက် အမျှဝေ ပေးကြပါလိမ့်မယ်။See More
Traditionally Dr Naing Aung groomed the murderers. He knows these things all way along, and still now, some media men have in one way or the other more affiliation with these particular ABSDF murderers, (not the ordinary people there). The …new success of Dr. Naing Aung is that he is now grooming poor Ko Moe Thee. It isasad thing..Who is the master? Dr Naing Aung would have to sayathing these day, but Ko Moe Thee will get out of his way ( at his own expense ) to protect Dr. Naing Aung. It isasad thing..See More
Udp Myanmar http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=2669
The “Kachin Massacre” was committed in northern Burma by members of the All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF), an armed group fighting the military. February 12th isadate of great significance for Burma. On that historical day in 1…947, national hero Aung San and ethnic nationalities leaders signed the Panglong Agreement, which granted equality and national self-determination for all the people of Burma, and the date has been commemorated ever since. But on the 45th anniversary of what is now known as Union Day, in the jungles of Kachin State,agroup of Burmese democracy activists were murdered under shadowy circumstances in 1992. The “Kachin Massacre” was committed in northern Burma by members of the All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF), an armed group fighting the military regime from its bases along the border with China, Thailand and India. The victims? Not soldiers from the hated junta or their sympathizers; but 15 members of their own organization. Lawlessness in the jungle is not new to Burma’s struggle against military dictatorship. In the 1960s, communist party members who took up arms in the jungle to fight the central government committed several purges against their own members. But when an estimated fifteen ABSDF members were executed on charges of espionage in Pajau, Kachin State, it markedanew episode in Burma’s sometimes bitter internecine feuding. More than ten years later, many dissidents who still belong to the ABSDF are reluctant to discuss the crimes in the jungle for fear of opening old wounds as the incident has come back to haunt former ABSDF chairman, Dr Naing Aung. Poised to study at Harvard University’s Kennedy School of Government later this year, Dr Naing Aung’s scholarship was deferred indefinitely after Harvard learned of his alleged role in the executions from protest letters sent by human rights activists and professed victims of the ABSDF’s crimes. In recent years, three former prominent ABSDF members have been granted scholarships at Harvard. But questions over the judicial process and the guilt of the executed have resurfaced since the chairman was refused entry into the university. Dr Naing Aung, now the executive director of the Network for Development and Democracy (NDD), declined an interview with The Irrawaddy. A former ABSDF colleague now living inaWestern country commented that Dr Naing Aung may not have ordered the killings but could be guilty of protecting the executioners. Aung Naing, who was then chairman of the northern ABSDF and is nowapolicy board member of the NDD, told The Irrawaddy that they executed 15 ABSDF members for working as spies for the military regime. He said about 80 members had been detained on similar espionage charges since mid-1991. The excesses of Burma’s military intelligence services are well known, but many observers question why Rangoon would send suchalarge number of spies to one place. A more likely theory, they say, is that the executions werearesult ofapower struggle within the ABSDF. Reports from those who escaped from execution and fled to the Thai border said it was possible that some of the 80 suspects may have been spies, but the majority of those detained were genuine democracy activists. Among those executed was Htun Aung Kyaw, chairman of the northern ABSDF until he was arrested for spying. During the 1988 democracy movement, he wasaprominent student leader in Mandalay, Burma’s second largest city, and wasavice-chairman of the All Burma Federation of Students Unions (Upper Burma) before he left for Kachin State. Htun Aung Kyaw’s outraged relatives and other activists in Mandalay want to keep those who ordered and committed the executions out of the city. “They are not welcome here,” said one prominent Mandalay dissident. However, the unsubstantiated evidence surrounding the executions has left the current ABSDF top brass inamessy and complex public relations imbroglio. “I don’t want to give any comment on that incident at the present time,” said Than Khae, present chairman of the ABSDF. When pressed further, he added, “The event will be very controversial even when it is solved in the future.” Aung Naing and other ABSDF members who were involved in the executions insist that they had substantial evidence and confessions to support their spy charges. Other members and leaders of the ABSDF, however, maintain those claims are false and have denounced the killings. Min Htay,amilitary trainer with the northern ABSDF at that time and currentlyarepresentative of the same group, said he was almost certainafew of the detainees were government moles, but knows of at least one woman arrested for espionage, Nan Saw, who was notaspy. Nan Saw andalarge group of other suspected spies managed to escape execution. Many have since returned to Burma and others are now believed to be residing in western countries.See More
It’saJungle Out There By Kyaw Zwa Moe, Naw Seng, and Ko Thet JUNE, 2002 – VOLUME 10 NO.5Page2of 3)
Most could not be reached for comment. One prisoner who was not so lucky, however, was Maung Maung Kywe. He was first actively involved… in the Basic Education Student Union (BESU), which was established in 1988, before later receiving military training with the ABSDF in Kachin State. Initially, Maung Maung Kywe joined the democracy movement to fight against the military regime, said his friend and former BESU colleague, Nay Lin, but was later executed with 14 others for being spies. But some believe that the internal purges actually claimed many more lives. Moreover, some have come out recently admitting that suspects were tortured in detention. A senior ABSDF member, who was an eyewitness to the event, said that besides the 15 who were executed about five to 10 people died due to torture during the interrogation, including U Sein. U Maung Maung Tate, who wasaformer political prisoner with U Sein in the 1970s, and is now the chairman of the ABSDF’s three-man central judiciary committee, said, “U Sein had very strong political beliefs in prison, so it is difficult for me to believe that he wasaspy.” Aung Naing said that U Sein died in detention from poor health, not torture. He did admit, however, that beatings and electric shocks were applied during the interrogation, but could not confirm how many died in detention. Labya Laseng,amember of the central committee of the ABSDF in 1992, said that three detainees committed suicide during the interrogations. Others have said that some detainees who later escaped—including women—were tortured and now suffer severe mental illnesses asaresult. ABSDF leaders in Kachin State explained that they approached international organizations such as the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to accept the detainees, but these organizations could not take any responsibility, although Amnesty International issuedarequest to stop the executions. Aung Naing, who has close ties with the former chairman, told The Irrawaddy that Dr Naing Aung had nothing to do with the executions: “The capital punishment was ordered by the central committee of the northern ABSDF though we informed the ABSDF central headquarters,” explained Aung Naing. “We had our own authority and the capital punishment was decided by eight members of the central committee of northern ABSDF, including Kyaw Kyaw, Than Chaung, Myo Win, Sein Aye, Aung Gyi, Nay Tun, Labya Laseng and myself.” At the time of the executions in 1992, the ABSDF was already divided into two rival groups: one headed by Moe Thee Zun and the other by Dr Naing Aung. Aung Naing Oo, who served as spokesman of the foreign affairs department of the Moe Thee Zun group said, “We officially stated that we had no connection whatsoever with that incident and also denounced the atrocities.” A few years later, more atrocities in the jungle would follow. In one instance in 1997, Myo Win,asenior ABSDF member, ordered the execution of Soe Win on charges of “leaking information”. But Myo Win failed to inform the central committee, thus stirring up more discontent within the organization. Aung Naing Oo, who studied at Harvard’s Kennedy Schoolafew years ago, said that he had had enough and resigned from the ABSDF in 1999. Ina1999 interview with The Irrawaddy, Dr Naing Aung said that “even though we have the death penalty, we try to avoid it as much as we can since we have been blamed by international organizations about our executions with the spies.” When asked if he was comfortable with the decisions to execute former members, he said: “As the head of the organization, sometimes I’m not only worried, I’m afraid. Because in some situations [where] you have to take responsibility, you don’t really see what happened, and you have to rely on [others’] reports.” Nevertheless, many dissidents still believe that the ABSDF’s ugly past will continue to haunt their former leaders. Some warn that Dr Naing Aung’s suspended admission to Harvard could be just the beginning of wider repercussions that will reach others in the dissident community who committed acts of injustice. Whether Harvard will continue its regular scholarship program with Burmese students is uncertain. Aung Naing blamed the ABSDF’s judicial quandary on Burma’s pervasive militarism and weak education system: “Although we talked about democracy and human rights, we didn’t thoroughly realize what democracy and human rights meant. Our education system did not prepare us to understand those concepts.” For those who have fled Burma in opposition to the killing and persecution perpetrated by the military regime, some have been subjected to similar inhumanities on occasion within their own dissident groups during their 14-year struggle for democracy.
Dr Naing Aung’s recent collegiate setback has brought dissident injustices back into the spotlight, but getting eyewitnesses and other involved parties to recount the events openly isadelicate matter. For now, however, full …disclosure of the ABSDF’s executions depends on whether Burma’s pro-democracy activists value “truth” over “camaraderie”.It’saJungle Out There,By Kyaw Zwa Moe, Naw Seng, and Ko Thet JUNE, 2002 – VOLUME 10 NO.5
Moe Lay သခင်သန်းထွန်း ရဲ့ ဖြုတ်ထုပ်သတ် လမ်းစဉ်အတိုင်းပါဘဲလား။ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။
December 25, 2011 at 8:30 am | Reply
Zaw Thura မြောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကျောင်းသားလေးယောက် အသတ်ခံရတော့မယ့်ဆဲဆဲ သာယာဝတီက ဦးကျားကြီး အာမခံပြီး လာရောက်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် လွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ..အဲ့ဒီတု​န်းက ဘန်ကောက်ပိုစ့်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပုံတွေပါလို့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုသိရပြီး လိုက်လာတာပါ…သာယာဝတီထောင်​ကို ရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်း ဦးကျားကြီးကို သိပါတယ်..သက်ရှိထင်ရှားရှိေ​နပါသေးတယ်..သူ့ သား ကိုကျော်နိုင်ဦး ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူ လွတ်မြောက်လာခဲ့သူပါ တစ်လောတုန်းက သာယာဝတီမှာ ဆရာစံ နှစ် ၈၀ အမှတ်တရပွဲကို ဦးဆောင်လုပ်ခဲ့သူပါ…ထင်း​ခွေမကြုံရင် ရေခပ်အကြုံကို ပြည်တွင်းက စောင့်မျော်နေပါတယ်..။
Boon Myo Myo ABSDF တောထဲက အရှုပ်တော်ပုံကတော့ကွာ….ြေ​ပာချင်ဘူး…ကျနော်(၁၉၉၇)တု​န်းက မဏီလွိုင်ကန့်ကို သူငယ်ချင်းရှိလို့ လာလည်ဖူးတယ်….စစ်ဗိုလ်နဲ့​တူလို့ ထောက်လှမ်းရေး ထင်နေကြတာ…နောက်တော့ အဲဒီထဲက ထားဝယ်သားတွေနဲ့ စကားပြောလို့ ထားဝယ်မှန်းသိသွားမှ ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ယုံသွားတယ်…(နို့မို့ဆို လျှောနိုင်တယ် အဲဒီကန့်ထဲမှာလည်း ခဏခဏ လူသတ်မှုဖြစ်တယ်တဲ့)…ဘာမှန်းလဲတိဘူး…ဗမာက ဗမာ၊မွန်ကမွန်တန်းလျား…ကရ​င်က ကရင်စု ခြုံတောထဲမှာ ကရင်စတိုင် တဲဆောက်ပြီးနေကြတယ် တအုပ်စုနဲ့ တအုပ်စု သိပ်မတည့်ကြဘူး ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေကြတယ်.​…အဲဒီမှာ ထားဝယ်သားက ကြားက ဟိုအုပ်စုနဲ့လည်းရော ဒီအုပ်စုနဲ့လည်း ရောလို့ရတယ်…မနက်မိုးလင်း​တာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဖီးချိုင်ဆိုင်မှာ ဘီယာသောက်ကြပြီ…နိုင်ငံခြားကို ထွက်ရမယ့် အုပ်စုတွေ နှုတ်ဆက်ပွဲနဲ့တိုးရင်တော့ ဝါးတီးပွဲပဲ့….နောက်ဆုံးေ​တာ့ (ABSDF)မှာ ခေါင်းဆောင်မကောင်းလို့ပဲ့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်….
Htay Tint Kaung Myat Min ညီလေးရေ ။ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တွေ အားလုံးရဲ့နမူနာ သမိုင်းက ၁၉၄၇ ကထဲက မှားလာတာ ။ မမွေးခင်ကထဲက မှားလာတဲ့ သမိုင်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ လူငယ်ဘဝတွေမှာ အာဏာရူးဆိုတဲ့ လူတန်းစားတစုကို မသိမသာမွေးပေးခဲ့ကြတယ် ။ စစ်ထဲဝင်သူတွေက စစ်အာဏာရှင်တွေ ဖြစ်လာသလို တော်လှန်ရေးထဲရောက်သွားသူတွေလဲ တော်လှန်ေ၇း အာဏာရှင်တွေ ဖြစ်လာတယ် ။ ဒီလို တယူသန်တွေ ပြောတာကို နားယောင်တတ်တဲ့ တို့ တိုင်းပြည်က လူမျိုးတွေ အားလုံးရဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာ လူတိုင်းကို ဒုက္ခရောက်နေပြီလေ ။ ဒို့ တတွေ အခုလို ပြည်တွင်းပြည်ပ အချိန်ရ ခိုက်မှာ လိုအပ်တာတွေ သိအောင်မေးမြန်းပြီး ပြည်တွင်းက လူတွေ ဘဝ ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါ ။ အမှန်တရားဆိုတာ ပျောက်ကွယ်စေတဲ့ အရာထဲမှာ မပါဖူး ။ နေဝင်း ခင်ညွန့်သန်းရွေ တို့ လူသတ်မှုတွေလဲ စာအုပ်ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေပြီ ။
December 25, 2011 at 8:32 am | Reply
Htay Tint Boon Myo Myo ကျွန်တော်လည်း မနီလွိုင်ကို ၁၉၉၇ ကျမှ ရောက်ဖူးပါတယ် ။ ရောက်ရောက်ခြင်း လုံခြုံရေးစစ်ဆေးချိန်နဲ့ တွေ့ လို့သတင်းပို့ လိုက်ရပါတယ် ။ ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှု မတူသူတွေ သူ့ အစုနဲ့ သူနေကြပါတယ် ။ ကျောင်းသားတွေ မြန်မာပြည်ထဲပို့ တဲ့ စာတွေကိုင်ပြီး မြန်မာထောက်လှမ်းရေးတွေ ထိုင်းနိူင်ငံထဲကို ၁၉၉၄ မှာကထဲက ဝင်လာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ၂၀၁၀ မှာ အိမ်က ညီနဲ့ ပြန်တွေ့ မှ အတိအကျသိရပါတယ် ။ ထောင်ကျော်စာရင်း ကျောင်းသားတွေထဲက မနက်မိုးလင်းရင် အရက်သောက်တာ လူအနည်းငယ်ပါ ။ စားရတဲ့ ထမင်းဆိုတာ သိမ်းထားရင် ၃ နာရီဘဲ ခံတယ် ။ သိုးသွားတယ် ။လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရပါတယ် ။ လူသတ်မှုဖြစ်တာကလဲ ၃ မှုရှိခဲ့ပါတယ် ။ ရိုက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ် ။ အရက်သောက်တာတို့စကားနိူင်လုတာတွေကနေပြီး ဖြစ်ကြတာပါ ။ မနီလွီုင်စခန်းမှာ ကျောင်းသား စခန်းကော်မီတီ ဆိုတာ ရှိပါတယ် ။ ထိုင်း အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုထားတာပါ ။ စခန်းတွင်းမှာ နေထိုင်ကြသော လူတွေအားလုံး ထိုင်းဥပဒေ နဲ့ အညီနေထိုင်ကြရပါတယ် ။ ၁၉၉၉ ဦးဇင်းမောင် အသတ်ခံရမှုမှာ ယနေ့ အထိ တရားခံ မရှိသေးပါ ။ အလုံပိတ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားစခန်းပြင်ပက ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာ ပြင်ပက ကြေးစားတယောက် ပုဆိန်နဲ့ လုပ်ကြံခဲ့တယ်လို့ သာ မှတ်ချက် ပေးနိူင်ပါတယ် ။ဖေ့ဘုတ်မှာ ပြည်တွင်း လူငယ်တွေ ဝင်ဖတ်နေလို့ရေးပြတာပါ ။
Ko Ko Htay တော်လှန်ရေုးကိုခုတုံးလုပ်ကာအာဏာရူးပြီးလူမဆန်စွာယုတ်မာရက်စက်ခဲ့ကြတဲ့.မြောက်ပိုင်း အေဘီအက်စ်ဒီဖက် မှသူများနိုင်အောင်၊အောင်နိုင်၊ထွန်းအောင်ကျော်၊သံချော​င်း၊မျိူးဝင်းအကြောင်းအဖြစ်​အပျက်အစုံအတွင်းရေးများမကြာ​မီလူတိုင်းဖတ်ကြရတော့မည်။
December 25, 2011 at 8:36 am | Reply
Htay Tint ကနေဒါရောက် မြန်မာကျောင်းသားတွေ စုစည်းနေတယ်ကြားပါတယ်။ သူတို့ အဖွဲ့ တွေ ထုတ်ပြန်ဖို့ ရှိပါတယ်။ မှတ်တမ်းတွေကို တောထဲမှာ လက်ရေးမူတွေနဲ့ ရေးခဲ့ပြီး ပလပ်စတစ် သောက်ရေဗူးတွေနဲ့တောထဲကနေ အသက်စွန့် ပြီး သယ်ထုတ်သွားပါတယ် ။ လောလော ဆယ်တော့ သမိုင်းမကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ လူထုကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ဦးဆောင်မှု မပေးနိူင် အောင် စစ်တပ်ကလာသူ ။ ပါတီကလာသူ ။ ကြံ့ ဖွံ့ ကလာသူ ။ တိုင်းရင်းသားက လာသူ ဘယ်သူဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မှတ်တမ်းတွေ အစစ်တွေနဲ့တင်ပြသင့်ပါတယ် ။
Zaw Tun Aung ကိုစိုးလေးလို ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်သူတွေ နအဖကို အဲဒီအချိန်ကထဲက
Love Burma Who’s for Comission Of Inquiry ( COI ) Former Military Dictator Than Shwe Groups (or) ABSDF( Moethee Zun )( Dr Naing Aung ) (Dr Aung Naing), Mark Famaner BCUK ( Burma Campaign UK ),Aung Din USCB ( US Campaign for Burma ),Dr Myint Cho ( Burma Campaign Australia ), Aung Htoo ( BLC ) ( Burma Lawyers Council ),KNU ?????????Why did Daw Aung San Suu Kyi refuse for Comission Of Inquiry ( COI )???????She dealed Quantana just for Inquiry??? She didn’t accept whoever to prosecute.!!!!!!!!!!!!Why we didn’t achieve to restore Democracy , Human Rights in Burma until now????????Why( inside) Burmese people didn’t believe (outside) opposite groups ??????? What’s for they’re doing???????? Is it for( inside)people or own power,own profits?????????
December 25, 2011 at 8:38 am | Reply
Love Burma http://​tayzathura.blogspot.com/​2010/03/​killing-fields-of-under-abs​df-dr-naing.html
.: Killing fields of under ABSDF Dr. Naing Aung and Dr. Aung Naing.
December 25, 2011 at 9:07 am | Reply
Aung Naing had admitted to the executions of young ABSDF students in the book:
December 25, 2011 at 9:08 am | Reply
oryad·da yad·da \_ˈyä-də-ˈyä-də\_ oryada yada yadaoryadda yadda yadda \_-ˈyä-də\_
: boring or empty talk yada yada about the economy> —often used interjectionally especially in recounting words regarded as too dull or predictable to be worth repeating
“The Yada Yada” is the 153rd episode of the American NBC sitcom Seinfeld. The 19th episode of the 8th season, it aired on April 24, 1997. George’s girlfriend is big on using the phrase “yada yada ya…en.wikipedia.org/wiki/The_Yada_Yada
ဝိုင်ထွန်ညို ဒီအာဂျီ Says:
January 22, 2012 at 11:39 am | Reply
1992နှစ်မြောက်ပိုင်း ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်တွင် ၇က်စက်ကြမ်းကျုပ်သည့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မူတွင်ပါဝင်သူများ ဖေါ်ထုတ်၇န်။